‘भर्जिन’ शब्दको उत्पत्ति वृतान्त – आफ्नो समाचार
‘भर्जिन’ शब्दको उत्पत्ति वृतान्त
Afno News — २० जेष्ठ २०७५, आईतवार ०९:४५0comment
अंग्रेजी शब्द ‘भर्जिन’लाई कौमर्यताको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ। तर कहिलेदेखि यौन सम्पर्क नगरेकालाई ‘भर्जिन’ भनिन थालियो भन्ने बारेमा रोचक प्रसंग रहेको छ।
‘भर्जिन’ शब्दको शाब्दिक अर्थ ‘शुद्ध’ हो। अर्थात् शत-पतिशत शुद्ध, बिना कुनै मिसावट, पवन र पवित्र ।
अंग्रेजी भाषामा ‘भर्जिन’ शब्द पहिलो चोटि सन् १२०० मा सुनिएको हो । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ट्रिनिटी कलेजको पाण्डुलिपिमा uirgines शब्द प्रयोग भएको भेटिन्छ । त्यसमा एउटा वाक्य भेटिन्छ ‘martirs and confessors and uirgines maked faier bode inne to women.’ यही urigenes शब्द पछि गएर virgin भएको हो ।
यसका अतिरिक्त ‘भर्जिन’ शब्दको प्रयोग अधिकतर इसाई धर्मसँग जोडिएको पाइन्छ । चर्चका पादरीहरूको लेखनमा यस शब्दको भरपुर प्रयोग भएको भेटिन्छ ।
उहिले ‘भर्जिन’ शब्दको सम्बन्ध कुनै केटीको धार्मिक मान्यतासँग जोडिने योग्यताको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्थ्यो । अर्थात् कुनै केटी चर्चसँग जोडिएको खण्डमा उसका लागि यो शब्दको प्रयोग हुने गर्दथ्यो ।
अंग्रेजी भाषाका प्रचलित शब्दकोशहरूमा ‘भर्जिन’ स्शाब्द्का लामा लामा परिभाषाहरू भेटिन्छन् । अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा मात्रै ‘भर्जिन’ शब्दका १८ वटा परिभाषा रहेका छन् ।
११ हजार ‘भर्जिन’हरूको नरसंहार
चौथो-पाँचौं शताब्दीतिरको एउटा घट्ना छ जसलाई भर्जिन शब्दसँग जोडेर हेरिन्छ । ब्रिटेनको दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रका एक राजाकी अर्सुला नाम गरेकी छोरी थिइन् । उनी आफ्ना पिताको आग्रहमा एक जना मुर्तिपूजक गभर्नर कोन्यान मेरिओडोकसँग विवाह गर्न राजी भइन् ।
उनी ११ हजार कुमारीहरूसँग पानी जहाजमा आफ्ना हुनेवाला पतिलाई भेट्न गैरहेकी थिइन् । यात्राको बिचमा समुद्री आँधी आएपछि उनले पहिले रोम गएर पोपलाई भेट्ने निश्चय गरिन् ।
तर उनको यात्राको बीचमै उनको समूहमाथि हंस नाम गरेका घुमन्ते जतिको आक्रमण भयो र अर्सुला लगायत सबै ११ हजार कुमारीहरू मारिए । पछि अर्सुलालाई सन्त घोषणा गरियो ।
भर्जिन आइल्यान्ड्स आइल्याण्डस्
क्रिस्टोफर कोलंबसले सन्त अर्सुलाकै सम्मानमा एउटा समुद्री द्वीप समूहको नाम नै भर्जिन आइल्यान्ड्स राखे । एटलान्टिक महासागर र क्यारेबियन सागरबीचको यस द्वीप समूहलाई ब्रिटेनमा ‘भर्जिन आइल्याण्ड’ भनिन्छ भने अमेरिकामा ‘भर्जिन आइल्यान्ड्स अफ् युनाइटेड स्टेट्स भन्ने गरिन्छ ।
मानिसलाई दैनिक क्याल्सियम कति चाहिन्छ ?
नेपाली मिडिया आवाज विहिनको आवाज हो कि अश्लिलताको आवाज हो ?
वि.सं. २०७५ पौष २४ गते मङ्गलबारको राशिफल
सिरियामा यसरी भएको थियो युद्धको सुरुवात